Waxaan ahay guri laawe ama qof aan cinwaan go'an lahayn - Settled
naad tahay guri la’aawe ama qof aan cinwaan go’an haysan kaama celinayso inaad dalbato Xaaladda Deggan, laakiin waxaa laga yaabaa inay dhib kugu noqoto inaad keento qaar ka mida macluumaadka Xafiiska Arrimaha Gudaha ku weydiinayo.
Tusaale, waxaa laga yaabaa inay dhib kugu noqoto inaad keento caddeyn degganaanshahaaga UK. Waxaa kaloo laga yaabaa inaadan haysan baasaboor ama kaar aqoonsi.
Waxaa laga yaabaa inaadan haysan cinwaan iimeel ama aadan si sahlan u heli karin kombiyuutar.
Haddaad haysatid telefoonka casriga ee Android iyo baasaboor ama kaar aqoonsi, waxaad fiirin kartaa inaad soo dejisan kartid App, aadna bilaabi kartid nidaamka codsigaaga.
Hadaadan haysan telefoonka casriga ama telefoon haysta teknoolajiyada habboon, waxaad dukumiintiyadaada ku masawiri kartaa xarunta iskaanka, lakiin waa inaad ballan samysatid, waxaana dhici karta inaad lacag bixisid, (caadiyan £14 codsigiiba).
Waa inaad codsigaaga ku smaysid kombiyuutar, laakiin waxaa laga yaabaa inaadan heli karin. Inta badan waxaa jira kombiyuutaro u furan dadweynaha ee yaala maktabadaha.
Waxaad kaloo la xiriiri kartaa Adeegga Mucaawinada Internetka, kaasoo kaa caawin kara saad kombiyuutar ku heli lahayd. My kaa caawin karaan codsigaaga.
Hagidda Xafiiska Arrimaha Gudaha ee kuu saabsan waxay u aqbali karaan caddayn degganaansho waxaa ka mid ah bayaan ka socda hay’ad samafal rasmi ah ama hay’ad kale oo aad xiriir la lahayd muddo waqti ah. Marka haddaadan cinwaan haysan tani waxay kaa caawin kartaa qaybtaas ka mid ah codsigaaga. Hoostan waxaad ka heli kartaa lifaaqyada ururada laga yaabo inay kaa caawin karaan caddaynta degganaanshahaaga.Waxaa laga yaabaa inay kaa caawiyaan codsigaaga, ama kuu diraan dad kaa caawin kara.
Hadday ku saamaysay guri la’aan, aadan la xiriirin urur kaa caawin kara arrintan, waxaan si xoogan kuugula talineynaa inaad la xiriirto kuwa baahidaada buuxiya, kana shaqeeya meesha UK aad haddeer kaga sugan tahay.
UK oo dhan